Baadi-goob baahsan oo wali ka socda Paris iyo haweeney 26-jir ah oo lagu daba jiro - iftineducation.com
iftineducation.com – Hayat Boumeddine (26-jir) oo ah xaaska Amédy Coulibaly, ninkii ka dambeeyay afduubkii dukaanka ee afarta ruux lagu dilay iyo haweeneydii booliska aheyd ayay si weyn u baadi-goobayaan booliska dalka Fransiiska.
Gabadhan ayaa lagu eedeynayaa in ay ninkeeda ku caawisay falkii uu ku kacay islamarkaana uu ku dilay haweeneydii booliska aheyd iyo afduubkii dukaanka yuhuudu laheyd ee afarta ruux uu ku dhex dilay.
Boolsika ayaa ku tilmaamay haweeneydan mid hubeysan oo khatar ah, waxayna shacabka uga digeen in ay iyagu la macaamiltamaan balse ay kusoo wargeliyaan booliska hadii ay macluumaadkeeda helaan.
Magaalada Paris ayaa waxaa laaminkii afaraad si xowli ah uga soconaya howlgalkii kooxo dabley ay ka fuliyeen magaaladaasi oo lagu bartilmaameedsaday xafiiska jaraa`idka Charlies Hebdo oo ah jara`is lagu sawiray laguna aflagaadeeyay Nabi Muxammed NNKH iyo dukaan ay lahaayeen ganacsato Yuhuud ah.
Si kastaba weeraradan ka dhacay Paris ee kooxihii ka dambeeyay la wada dilay ayaa waxaa masuuliyaddiisa sheegtay kooxda Al-Qaacidda ee ka howl gasha dalka Yemen.